उसको लिङ्ग यस्तै एक वा सवा एक इन्चको छ | Narinepal
सर्वप्रथम त आफ्नो नातिको शरीर अनि विशेष गरेर यौनाङ्गका बारेमा यसरी चासो राखी प्रश्न गर्नुभएकोमा धन्यवाद। हुन त जन्मनासाथ सन्तान छोरा हो कि छोरी हो भनेर छुट्टयाउन धेरैको आँखा शिशुको यौनाङ्गमै जान्छ तर त्यसलाई गहिरोसँग धेरै कम मातापिता वा तपाईंजस्ता अभिभावकले हेरेका हुन्छन्। शिशु अवस्थामा होस् वा बाल्यकालमा अन्य शारीरिक विकास मात्र होइन, यौन अङ्गको वृद्धि तथा विकास राम्रोसँग भएको छ वा छैन हेर्नुर् मातापिता तथा अभिभावकहरूको कर्तव्य पनि हो।
केही व्यक्तिको लिङ्ग साँच्चिकै सानो हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिलाई micropenis वा micro-phallus भनिन्छ। शिशु जन्मदा लिङ्ग तन्काएर नाप्दा १ दशमलव ९ सेन्टिमिटर अर्थात् पौने इन्चको भए शंका गर्नुपर्ने हुन्छ र कारणको खोजीनिती गर्नुपर्छ। यस्तै हजार जना व्यक्तिमा यस्तो स्थिति ६ जनालाई हुन सक्ने देखिएको छ। कत्रो लिङ्गलाई micropenis भन्ने त ? सामान्यतया लिङ्गको माथितिर (dorsal) उत्तेजित लिङ्गलाई नाप्दा लिङ्गको लम्बाई सालाखाला मानव लिङ्गको नापभन्दा २ दशमलव ५ standard deviation भन्दा सानो भए त्यसलाई micropenis भनिन्छ।
जीवनभर लिङ्गको नाप एकनास हुँदैन भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ। बाल्यकालमा सानो आकारको लिङ्ग किशोर अवस्थामा आएर निकै वृद्धि हुन्छ र झन्डै त्यही आकारमै जीवनको लामो अवधिभर कायम रहन्छ। किशोरावस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि यसको आकार ठीक एकै खालको हुँदैन। एक अध्ययनअनुसार यस्तै ११ वर्षतिर उत्तेजित अवस्थामा सालाखाला ३ दशमलव २९ इन्च लामो लिङ्ग १३ वर्षतिर ५ दशमलव ३४ इन्चको हुन्छ भने १६ वर्ष तिर ६ दशमलव १८ इन्चको भैसकेको हुन्छ। उक्त अध्ययनमा १८ वर्षको उमेरमा सबै भन्दा बढी ६ दशमलव २९ इन्चको भेटिएको थियो भने १९ वर्षमा त्यसभन्दा कम अर्थात् ६ दशमलव २५ इन्च। यो नाप नेपालीको नभए पनि यहँा उत्तेजित लिङ्गको अधिकतम लम्बाईमा हुने परिवर्तनलाई दर्साउन खोजिएको हो।
लिंग सानो अर्थात् mष्अचयउभलष्क हुने कारण के-के हुन सक्छन् ?
लिङ्ग सानो हुनु अनेक खराबीसँग सम्बन्धित हुनसक्छ। गर्भमै रहँदा पुरुष हार्मोनको उत्पादन वा प्रभावमा भएको कमीका कारणले त्यस्तो हुनसक्छ। उदाहरणका लागि अण्डकोष विकाससम्बन्धी खराबी ९तभकतष्अगबिच मथकनभलकष्क, प्ष्लिभाभतिभच कथलमचomभ० वा अन्य हार्मोनसम्बन्धी खराबी (testicular dysgensis, Klinefelter syndrome) वा (defects of testesterone synthesis) वा gonadotropin deficiency अन्य प्रकारका congenital hypogonadism इत्यादि। जन्मजात हुने growth hormone deficiency वा hypopituitarism जस्ता खराबीमा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ।
तपाईंको नातिको लिङ्गको परीक्षण जन्मनासाथ भएको थियो कि थिएन, पत्रमा केही उल्लेख छैन। अर्को विचार गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने धेरैजसो ८ देखि १४ वर्षका केटाहरूमा लिङ्ग यस्तो प्रकारले सानो अर्थात् micropenis नै नभए पनि यस्तो भएको लागेको हुनसक्छ। केही उदाहरणमा supra pubic fat (जघनास्थी नजिक भएको बोसो) मा लिङ्ग लुकेको हुनु वा शारीरिक बनोट ठूलो र चौडा भए पनि लिङ्ग सानै हुँदा तुलनात्मक रूपमा झनै सानो देखिएको हुनु अनि किशोरावस्थामा प्रवेश हुनमा ढिलाइलाई लिन सकिन्छ। तपाईंले माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न सम्भावनाहरूमा विचार गर्नुभएकै होला। हुन त तपाईंले अन्य कुरा सामान्य नै भएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। समाधानका कुरा गर्दा अवस्थाअनुसार उचित उपचार वा समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईंलाई थाहै होला, सामान्यतया लिङ्गको विकास growth hormone भन्दा testosterone मा भर पर्छ। शिशुकालमै लिङ्ग सानो भएको पत्ता लागे थोरै समयका लागि testesterone दिइन्छ, तर ठूलो भएपछि यसरी उपचार गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ। बाल्यकालमा testesterone दिँदा virilization तथा bone maturation हुनसक्छ। केही स्थितिमा त लिङ्गको नाप पनि सानै हुन सक्छ। केही परिस्थितीमा शल्यक्रिया (phalloplasty) यसको विकल्प हुनसक्छ, तर त्यसमा सजिलैसँग सफलता हासिल हुँदैन।
मातापिताको चिन्ताको कारण
स्वाभाविक हो, कुनै पनि जिम्मेवार अभिभावका लागि यसरी चिन्ता हुनु। यसरी लिङ्ग सानो भए कतै यौन सुख दिन नसक्ने हो कि वा सन्तान जन्माउन नसक्ने हो कि जस्ता अनेक चिन्ता हुनसक्छन्। त्यसबाहेक साथीभाइले पौडी खेल्दा, खुला स्थानमा वा सामूहिक रूपमा स्नान गर्दा वा अन्य त्यस्तै अवसरमा लिङ्गको स्थिति थाहा पाएर जिस्क्याउने पो हुन् कि ? जस्ता अनेक कुराको चिन्ता हुनसक्छ।
जहाँसम्म भविष्यमा श्रीमतीलाई यौन सुख प्रदान गर्ने क्षमताको कुरा छ, त्यसका लागि महिलाले कसरी यौन सम्पर्कबाट आनन्द पाउँछन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। महिलाको यौनसंवेदनशील अंग वा भाग योनिको भित्री तहमा केन्द्रित हुँदैन। प्रायः सबैजसो महिलाको यौन सुखको केन्द्र भगांकुर हो। महिलाले यही भगांकुरको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष घर्षणबाट यौन आनन्द प्राप्त गर्छन्। भगांकुर बाहिरतिरै हुन्छ। योनिको कुरा गर्दा पनि सम्पूर्ण योनिको लम्बाइ (४ इन्च) लाई हेर्ने हो भने यसको भित्री भाग होइन कि बाहिरतर्फको एक तिहाइ भाग नै विशेष रूपमा यौन संवेदनशील हुन्छ र साधारणतया छोटो भनिने लिंग पनि आफ्नो यौनसाथीलाई यौनसुख दिन पुग्ने नै हुन्छ। प्रमुख कुरा तपाईंको नाति वयस्क भएपछि निस्किएको वीर्यमा पर्याप्त मात्रामा स्वस्थ शुक्रकीट छ भने ऊ पिता बन्न नसक्ने कुरै भएन।
अन्त्यमा तपाईंले उसको लिङ्ग पटक्कै उत्तेजित नहुने कुरा गर्नुभएको छ। यो कुरा तपाईले कसरी अवलोकन गर्नुभयो र उक्त निष्कर्षमा पुग्नुभयो विस्तृत जानकारी भए जवाफ दिन सजिलो हुने थियो।
Posts Related to उसको लिङ्ग यस्तै एक वा सवा एक इन्चको छ
प्रश्नः म २४ वर्षीय पुरुष हुँ । मेरो लिंग अरू साथीहरूको भन्दा केही छोटो भएको महसुस भएकाले बेला बेलामा आत्मग्लानि हुन्छ । भविष्यमा श्रीमतीलाई सन्तुष्टि दिन सक्दिनँ ...
महिनावारी महिलाहरूमा हुने एक सामान्य प्रक्रिया हो। निषेचित डिम्बको डिम्बरोपण (पाठेघरको भित्तामा टाँसिने प्रक्रिया)का लागि बाक्लो भै तयार भएको पाठेघरको भित्री तह गर्भधारण नभएको स्थितीमा ...
कुनै उपाय छ कि ?
म १८ वर्षीया युवती हुँ। म साह्रै दुब्ली छु अनि मेरो महिना-महिनामा नियमित महिनावरी पनि हुँदैन, वर्ष-वर्षमा हुन्छ। चार वर्ष हुन लाग्यो यस्तो भएको। अस्पतालमा ...
म र मेरी गर्लफ्रेन्ड २२ वर्षका भयौं। हामीबीच प्रायःजसो कन्डम नलगाई -सेक्सको अन्तमा शुक्रकीट बाहिर फ्यालिन्छ) सेक्स हुन्छ। दुई-तीन महिनादेखि मिन्स पछि सर्ने समस्या भएको ...